Rubber Dhamu - Beijing IWHR Corporation (BIC)
Rubha Dhamu Rakavakwa neBIC muBangladesh
Sonai Rubber Dhamu (L = 45m, H = 4m)
(L = 84m, H = 3.5m, Makamuri maviri Ekuchengetedza Mvura)
Kaoraid Rubber Dhamu (L = 25m, H = 3m)
Sonai Nadi Rubber Dam (L = 54m, H = 3.5m)
BIC yakabatsira kumisikidza WMCA uye yakapa chirongwa chekudzidzisa kwevakuru mainjiniya muBangladesh
Rubha Dhamu Rakavakwa neBIC muVietnam
BIC yakavaka dhamu rekutanga rerabha muVietnam muna1997 (L = 25m, H = 2m)
Mamwe Madhibha eRabha akavakwa neBIC muVietnam
Rubber Dam rakavakwa neBIC muThailand
Dhamu rerabha rine L = 60m, H = 2.3m muThailand rakavakwazve neBIC kubvira payakakuvadzwa, pamberi payo rakavakwa pakutanga nekambani yekumhiri kwemakungwa.
Iri dhamu rerabha rine L = 93m, H = 4.15m muThailand, rakavakwa pakutanga nekambani yekumhiri kwemakungwa, rakavakwazve neBIC musi waKurume 9, 2009 sezvo yakakuvara mushure mekumhanya kwemakore mana chete.
Rubber Dam rakavakwa neBIC muKENYA
Dhamu rerabha rekutanga mu Africa nekambani yekune dzimwe nyika inozivikanwa pasi rose muna 1997, zvakaitika kuputika muna 2007 uye rakanga risingakwanisike kugadziriswa. Yakadzoreredzwa uye kutumirwa neBeijing IWHR Corporation munaFebruary 2, 2010, yakaiswa mukushanda izvozvi. Kureba kweDhamhu ndiko 49.5m; kukwirira kweDhamhu kuri 2.25m.
Rubha dhamu chirongwa pane EPC hwaro muMyanmar
Wetkamu Rubber Dam (20m kureba, 2.3m kukwirira, kuzadza mvura
Nga Laik Rubber Dam (64m kureba, 1.5m kukwirira, mweya-wakazara)
Rubber Dam Kuvaka paSiti